Ezigbo ụlọ maka ire ere - Ụlọ zuru ezu n'ụwa nile | Achọpụtara nke ọma
Nchọpụta Pụrụ Iche? Gịnị Na-akọwa Nchọpụta Pụrụ Iche?
Ndina na nri ụtụtụ ma ọ bụ AirBnBs
Ezigbo ụlọ na Chateaus maka ọrịre
Chọọchị a tọghatara
Shelọ Na-echebe ,lọ, Bermed ma ọ bụ Underlọ
Onwe-ezu, Prepper na Off-Grid eslọ
Ala na acreage
AHỤ AKWỤKWỌ maka ire ere
Njirimara ndi puru iche na igwe mmadu
Ihe karịrị 75,000 Homelọ Bulọ Na-enweghị Achọrọ Seehụ Ngwongwo Gị
Ka Anyị Mee Ka Ama Ya!
$ 40 / ọnwa
Brenda! Nke a mara mma! Daalụ maka ọrụ gị na nlebara anya na nkọwa. Nnukwu nhazi na nhazi. Nke a dị elu karịa ihe m tụrụ anya ya.
Jane M. (Maka onye nwe ya na -ere ya)
Daalụ! Saịtị gị na -eweta ndị na -azụ ihe pụrụ iche zuru oke! Nso edidiọn̄!
Bet P (Maka ire ere nke onye nwe ya)
Ụtụtụ ọma Brenda, Anyị erela ụlọ anyị! Ego ego zuru oke anaghị enye ihe ndapụta ihe ọ bụla! Enwere m obi anụrị, enweghị m ike ịmalite ịgwa gị. Enwere m ekele maka ihe niile i mere. Aga m akwado ọrụ na saịtị gị.
Patricia E. (Maka onye nwe ya ọrịre)
Ezigbo Brenda, Ị gafeela oku ọrụ. Ọ masịrị gị nke ukwuu na ọrụ aka gị na aka ...
Elizabeth S (Maka onye nwe ya ire ere)
Kedu ụdị mgbasa ozi dị ebube - Chaị! Daalụ, Brenda, maka ọkachamara ọkachamara gị!
Walter (Maka ọrịre nke onye nwe ya)
Naanị m chọrọ ịsị ekele maka enyemaka gị niile. Nkọwa gị banyere ụlọ ahụ wetara ọtụtụ ndị nwere ike ịzụ ahịa n'ụlọ ahụ. Ọtụtụ mmadụ hụrụ ya ma rere ya 20K karịa ọnụahịa arịrịọ! Aka m nọ na-enweta oku. Echere m na nkọwa gị nyere aka n'inweta onyinye dị n'elu.
Pat (Maka ere site n'aka onye nwe ya)
Ọ mara mma. I mere ezigbo ọrụ. Obi dị m ezigbo ụtọ. Enweghị m ike ịkele gị maka mbọ a. Enweghị m ike inwe obi ụtọ karịa.
Ọgaranya (Maka Ere Site Nwe ya)
Enweghị m ike ịkele gị maka enyemaka na nkwado niile ị nyere n'ụzọ. Ọ bụrụ na ọ bụghị nke gị amaghị m na m gaara enwetara na usoro ahụ. Gave na-agba m ume nke ukwuu na mbido, oge ọ bụla m kpọrọ oku ị ga-aza. Nke ahụ pụtara ụwa nye m.
Monique (Maka Ere Site n'aka Onye Nwe Ya)
Daalụ!!! Are bụ Nna-ukwu Ahịa. Azịza ha bụ ozugbo! Might nwere ike kuzie a N'ezie na ahịa Brenda! M ga-abụrịrị onye mbụ n'ahịrị.
Patsy N (Onye na -ere ahịa Keller Williams)
Brenda, ị mere nke ọma na nkọwa ndepụta ahụ. Daalụ maka gị "nkwenkwe" & ịnụ ọkụ n'obi gbasara ndepụta ihe onwunwe anyị.
N. Kuhn na Ezinne (Maka onye nwe ya)
N'ezie, ị pụtara dị ka kpakpando na-enwu gbaa n'ihe gbasara ọkachamara, arụmọrụ, ịnụ ọkụ n'obi, na nlekọta. Ọ ga-amasị m ire ụlọ site n'aka gị maka ebumnuche ndị a. Echiche kacha mma!
Fran G (Maka onye nwe ya)
Okwukwe L (Keller Williams Agent)
Meg L. (Edina Ezigbo Agent)
Guy L. (Maka ọrịre site na nke ya)
Angela B (Maka ọrịre site na nke ya)
Okwukwe L. (Keller Williams Agent)
Dustin B (Onye Ọrụ)
Bethany M (Maka ere site n'aka onye nwe ya)
Sam (Maka ere site n'aka onye nwe ya)
Ndewo, Brenda, M chọrọ ime ka ị mara na anyị nwere nabatara onyinye ahụ n'ụlọ anyị! Daalụ nke ukwuu maka ịrụsi ọrụ ike gị na ịre ahịa ihe onwunwe na ụwa!
Carl (Maka ere site n'aka onye nwe ya)
Matt (Aglọ Ọrụ Ezigbo )lọ)
Lelee ụlọ anyị dị iche iche maka ire ere
Ebe obibi dị na South Black Hills
4 zuru ezu, 1 ỌkaraBath
Ngwongwo Oke Ugwu Off-Grid
Ụlọ Hobbit na Vermont!
Obere ụlọ ime ụlọ
Ntugharị Ụlọ Nzukọ
Chọọchị 113 St
Nnukwu Acreage Waterfront Estate
3 zuru ezu, 1 ỌkaraBath
Unicorn House na Downtown Atlanta
Ala ụlọ akụkọ ihe mere eme
5595 US wayzọ Awara Awara 278
Chọọchị na Mgbanwe Homelọ
9251 Isi St.
2 zuru, 1 ọkaraBath
Ụlọ elu Hilltop Waterview Texas Estate
4 zuru ezu, 2 ỌkaraBath
Hụ ụlọ niile anyị nwere maka ire ere
Ịzụta Ụlọ Gị Pụrụ Iche?
Kpọsaanụ Ngwongwo m - $ 40 / ọnwa
Mee Mpempe Mgbasa Ozi
Ugbu a, ị nwere ike biputere njirimara gị pụrụ iche na saịtị anyị maka $ 40.00 kwa ọnwa!
Ma ọ bụ, anyị nwere ike ịmepụta usoro ahịa ahịa maka gị!
Nchọpụta Pụrụ Iche na-akọwapụta ihe site na ụdị iche. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ire ihe onwunwe gị pụrụ iche, a ga-edepụta ya ma were ya zụọ ahịa ebe a - ma ọ bụ - ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta, pịa ụdị akụ ị masịrị gị.
Pụrụ iche “Finds…” - Chọọ Ulọ Anyị Pụrụ Iche Maka ire ere site na Ngwongwo Ngwongwo
You nwere nilọ Pụrụ Iche'd Ga - achọ onhụ na Saịtị Anyị?
Anyị ga-ewepụta gị Kapeeti Na-acha uhie uhie!
Gịnị mere m ji malite Pụrụ Iche "Chọta ..."?
Echiche nke pụrụ iche “Finds…” mepụtara site na ahụmịhe nke onwe m dị ka onye na-azụ ahịa, na mgbe ahụ dịka onye na-ere ere - ogologo oge tupu m ghọọ onye nwe ulo.
Dị ka gị, enwere m ọtụtụ ụlọ pụrụ iche maka ọrịre. Dị ka onye na-azụ ahịa, enwere m nkụda mmụọ na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị na-ahụ maka ọdịnala nke ala na-enweghị ike ịghọta na m na-achọ ihe onwunwe pụrụ iche, n'ihi ya, ha gosiri m ihe ngosi ọkọlọtọ na nke ụwa nke dabara adaba na mpaghara dị warara nke MLS mpaghara ha.
Mgbe m dị njikere ire ụlọ m pụrụ iche, achọpụtara m na ụlọ ọrụ ọdịnala enweghị ihe ọmụma, nka, na ahụmịhe n'ahịa ihe ndị na-adịghị ahụkebe, yabụ, ejiri m ọtụtụ afọ mzụ ahịa ahịa m nwetara dị ka Director of Marketing nke New York Stock Exchange, jikọtara nke a jiri ikikere ala iji mejupụta oghere dị ezigbo mkpa na ụlọ ọrụ ụlọ, na voila! Pụrụ iche “Finds…” amụrụ!
Anyị na-ere ahịa ma na-akwalite ihe ndị a na-adịghị ahụkebe na ụlọ ndị pụrụ iche maka ọrịre.
Ka anyị nyere gị aka. Anyị bụ ụlọ ọrụ mgbasa ozi maka ụlọ ndị ọhụrụ. Anyị bụkwa ndị ezigbo ụlọ ewepụtara iji nweta ụlọ pụrụ iche.